Toddobaadkan Madashada sawirrada waxa marti inoogu ah saddexan Mujaahidiin ah oo saamayntooda ku lahaa halgankii hubeysnaa ee dibuxoreynta qaran ee SNM horseedka ka ahayd. Meesha sawirkan lagu qaaday waa magaalada Harar ee Itoobiya. Sannadku waa 1983kii. Waa sannadkii Cabdillaahi Askar laga soo badbaadiyay dilkii faqashtu u qorshaysay markii Hargeysa lagu qabtay. Waa muddo yar ka dib markii uu ka soo doogay silic-dilkii loo geystay.
Waxa isaguna si toos ah sannadkaa halgankii hubeysnaa ugu soo biiray oo ka soo baxay gudaha Maxamed Xaashi Diiriye (Lixle) oo bishii Juulay 1983kii ka hor Xarshin saraakiishu ugu magacawday Xoghayihii Ciidammada Xoreynta ee SNM.
Labadan sarkaal waxa ku dhex jira oo dhex taagan Ismaaciil Daa’uud Cigaal oo xilliyada qaar SNM uga wakiil ahaa magaalada Harar. Dhammaantoodba Ilaahay ha u naxariisto.
Nin la yidhaahdo Muxyaddiin Axmed Xasan ayaa sawirkan iiga soo diray dalka Austria. Waa uu ku mahadsan yahay, haddii aad ku dayataanna waa ay fiicnaan lahayd. Fadlan idinka oo isirka (original) sawirkiinna la hadhaya noo soo dira nuqul aan baahinno. Mahadsanidin.